Microstation: qaabeynta daabacaadda - Geofumed
Juunyo, 2010 Microstation-Bentley
Taas oo la adeegsata AutoCAD waxay leedahay macquul kale, waxaana laga yaabaa in taasi ay tahay sababta dadka qaar ay isku dayayaan inay ku sameeyaan Microstation waxay leeyihiin dhibaatooyin. Dhanka kale, sababtoo ah ma jirto caawinaad badan oo ku saabsan sida loo sameeyo iyo ka dibna habka loo sameeyo ma aha sida AutoCAD sameeyo.
Taas awgeed, waxaan sameyneynaa jimicsi, inkastoo aan soo jeediyo in mabaadi'da aasaasiga ah ee Microstation in la sii dheeraado haddii aysan marnaba la isticmaalin.
Khariidadda qaabka iyo xaashida
Tusaaluhu waa goobta shaqada, taas oo ah 1: 1, halkaasoo laga qaado. Tusaalaha aan muujinayo waa khariidad cadaw iyo aragti sii kordhaysa waa hab lagu muujinayo tilmaame mawduuc leh, oo dhan lagu dhisay qaabka.
Xaashida, (warqad) waa waxa ku jira AutoCAD waxaa lagu magacaabaa Layout, waxayna u dhigantaa sanduuq la xidhiidha cabbirka warqadda aan rajeyneyno inaan daabacno. Tani waa midda miisaanka, sababtoo ah qaabkani wuxuu noqon doonaa 1: 1
Ujeedadu waa in la abuuro wax soo saarka map a kiishadda dibadda ah, map asalka, tilmaanta on fog xaq iyo Mozilla in bidixda ee wareegga quarter ah, sida ku cad tusaale ahaan this:
Habka hore, kuwa aan garanaynin sida loo isticmaalo shaqadan waxay ka dhigeysaa xayawaanka, nuqul, miisaan, gooyaan, waxna sameeyaan si ay u abuuraan wax kasta oo ka mid ah tusaalaha. Khasaarada ayaa ah in haddii aad doonayso inaad wax ka bedesho khariidada asalka ah, wax kasta oo la sameeyey waa mid waxtar leh.
Sida loo dhiso nidaamka
Si aad tan u dhisto, waxaad isticmaashaa hawlaha loo yaqaan ' qaababka wadahadalka, ama ku calaamadee sanduuqa, kaas oo ku xiga talada tixraacyada. Haddii aan la arki karin, waxaa lagu sameeyaa badhan sax ah oo dhaqdhaqaaqa, sida Maamulaha Raster.
In rinjiyeynta this si dhow ula ekaan tixraaca, maxaa yeelay macquulka ah ee aad leedahay waa kaliya in, wacaya maps, qiyaasta isla ama wax kale oo dibadda ah qeexidda, la abuuro aad gooyay tirada ah una dhig print jir ah.
First, loo abuuro xaashida, taas waxa laga sameeyaa iyadoo button cusub oo reserved dhinacyo: nooca caleen, haddii 2 ama 3 in size, model magaca, qoritaan gaaban qiyaasta, qiyaasta style line,
Halkan qalabyada waxay u shaqeeyaan sida haddii aad ka shaqaynaysay qaabka, leydiga, khadadka, qaababka, qoraallada. Wax kasta waa isku mid, qaababka 8.9 oo loo yaqaanay "Microstation XM transparencies" ayaa la taageerayaa.
Dhismuhu waa mid fudud: Leydi ayaa ku yaal asalka, rubuc wareeg ah, laba leydi oo yaryar. Kadibna qalab si loo abuuro godadka gobollada waxaa lagu sameeyaa faraqa.
Waxa kale oo aad siin kartaa midabyo asal ah oo ku saabsan sheyga, la cayaaraan daahfurnaanta iyo mudnaanta si aad u aragto kuwa ay horay u socdaan ama ka dambeeya.
Sidoo kale, tani waxay abuuri kartaa canopies macluumaadka mashruuca, miisaanka, lambarka xaashida, iskuxirka iskuxirka, logos, iwm.
Khariidado ku qor shayga
Khariidadaha waxaa lagu dhejiyaa tixraacyo sanduuqa tusaalaha ah, marar badan sida aad filayso inaad ugu wacdo sheyga. Mid kasta oo ka mid ah ayaa leh magac macquul ah iyo cabir ah oo ku saleysan xaashida daabacan. Tani waxay u ogolaaneysaa call dhawaado 2 / 3D at qolfo kala duwan sheet isla, iyo hoos ku bixisaa Tilmaamo qaar ka mid ah qaab iyo baaxadda qoraalka, aragti guryaha raster ama PDF 3D.
Khariidadani waxay ku dhacdaa meel, sidaa daraadeed waxaan samaynaynaa nuqulka shaxanka waxaan rajeyneynaa inaan jarno oo aan ku qoro khariidada. Haddii aanu jeclaanno xajmiga, waxaan siinaa badhanka saxda ah oo aan hagaajinno guryaha adigoo bedelaya miisaanka. Ka dib si aan u gooyo waxaan isticmaalnaa xaanshiyaha maqalka waxaanuna taabanaynaa tirada.
Kadibna shayga la jarjaray wax walba iyo sawir ayaa loo rogi karaa khariidada, waa sida muuqaalka sawirka soo socda.
Inta kale waa isku day, isku day, sameyso khaladka iyo inaad ku sii socotid ilaa inta aad ka heleyso xirfad. Tixraaca tixraaca, qeex qiyaasta, xulashada shayga ruxaya, jarjar, raadi khariidada. Natiijada soo socota waxay muujineysaa habka tusaalaha ee hore loo soo uruuriyey.
In the case of Roobka a of maps cadastral, aadan u baahan in la tago maps finalka soo daabaco, laakiin ka tago modules caadadiisu magaca iyo taariikhda rubuc kala kooban aagga oo xiiso leh waa la dhisi lahaa. Haddii ay noqoto lambaro gaar ah oo khariidadaas ah sida lambarka xayawaanka deriska ah, waxaa laga yaabaa in lagu sawiray qaabeynta si ay u ilaaliyaan culeyska mawduuca.
Post Previous«Previous Imtixaanka Promark3 ... sawiro kaliya
Post Next Halka ...Next »
6 Jawaab "Microstation: qaabeynta daabacaadda"
Saaxiibo mahadnaq ah, waxqabad fiican
Hello, subax wanaagsan, waxaan ku siinayaa sharaxaad wanaagsan oo ku saabsan sida loo soo bandhigo diyaarad Microstation 🙂
Marta isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay caawin.
Ma aqaan sida loo sameeyo meeleeynta moodada ee MicroStation V8.
Qaar ka mid ah nidaamkan waxaa lagu sharxay faahfaahin dheeraad ah ee maqaalkan:
RasterMan isagu wuxuu leeyahay:
Taas oo aad ogtahay in sawirada carruurta ay yihiin nooc nooc oo ah qaabka RASTER (haa, Raster!)